Uyenza njani ubungakanani kwakhona beempawu ze desktop kwiMacOS | Ndisuka mac
I-Apple ibisoloko ibonakaliswa ngokunikezela ngenani elikhulu lokhetho ngokwezifiso xa simisela izixhobo zethu ukuba sinengxaki yombono. Ngaphakathi kokukhetha ngokwezifiso, ii-macOS ziyasivumela Yandisa okanye unciphise ubungakanani beempawu ezibonakalayo kwi desktop yethu
Ukunyusa okanye ukunciphisa ubungakanani beempawu ze-desktop kwikhompyuter yethu kunokusinceda sibeke izinto ezininzi kwidesktop (ukunciphisa ubungakanani bazo) okanye sandise nje ubungakanani bazo ukubona ngcono igama kunye nenxalenye yomxholo wayo. Le nkqubo ilula kakhulu kwaye ndivela eMac sikubonisa ukuba singayenza njani.
Kakhulu Yandisa ukunciphisa ubungakanani beempawu ze icon kwidesktop yethu, kufuneka sizibeke naphina kuyo kwaye ucofe kwiqhosha lasekunene le mouse okanye ucinezele ngeminwe emibini kwi-trackpad.
Emva koko, cofa apha Veza iinketho zokubonisa. Kwimenyu eboniswe ngezantsi, siyabona ukuba ubungakanani be icon engagungqiyo ngamachaphaza angama-64 × 64. Ukuba sifuna ukwandisa okanye ukunciphisa ubungakanani beempawu, kufuneka silayishe ibha ngasekhohlo, ukuba sifuna ukuyenza incinci, okanye ngasekunene, ukuba sifuna ukuyenza ibe nkulu.
Inketho elandelayo iyasivumela setha indawo yefayile kwigridi yedesktop, Ngale ndlela sinokwandisa okanye sinciphise isithuba phakathi kweefayile. Ikwasivumela ukuba sandise ubungakanani bokubhaliweyo kweefayile kwidesktop yethu kunye nokutshintsha indawo yeelebheli zefayile.
Ukongeza, ikwasivumela bonisa ukujonga kuqala kweefayile, kunye neenkcukacha zefayile, ezilungele ukuba xa sinesikhombisi okanye imifanekiso emininzi kwidesktop yethu ye-Mac. Ngalo lonke ixesha sisenza utshintsho, luya kubonakala kwangoko kwidesktop.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Tutorials » Uyenza njani ubungakanani kwakhona beempawu ze desktop kwiMacOS